Global Voices teny Malagasy » Kiobà : Nahazo loka lehibe ny mpamaham-bolongana nosakanana Yoani Sánchez · Global Voices teny Malagasy » Print
Kiobà : Nahazo loka lehibe ny mpamaham-bolongana nosakanana Yoani Sánchez
Voadika ny 09 Avrily 2008 12:33 GMT 1	 · Mpanoratra Elia Varela Serra Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, Kiobà, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety
Yoani Sánchez angamba no mpamaham-bolongana malaza indrindra any Kiobà, firenena izay voaramaso sy voafetra ny fahafaha-miditra amin’ny aterineto. Malaza dia malaza ho an’izay rehetra liana momba an’i Kiobà ny bolongan-dravehivavy Generación Y [es] ary avoitran’ny haino aman-jery tandrefana malaza tahaka ny The International Herald Tribune , The New York Times , Público  [es] na ny BBC Mundo  ho ohatra amin’ny fanehoan-kevi-piatahana (amin’ny filazan’ny mpitondra) anivon’ny aterineto matetika. Hatramin’ny nialan'i Fidel Castro sasatra  nialan’i Fidel Castro sasatra tsy hitondra an’i Kiobà tamin’ny volana febroary sy nitodihan’ny mason’izao tontolo izao ho any, dia nitombo hatrany ny lazan’ny Generación Y ary nahatratra 4 000 000 tamin’ny volana marsa ary nahatratra 1 600 ny isan’ny domberina (fanehoan-kevitra) tamin’izay nosoratany farany. Angamba noho izay lazany izay fa vao nakatson'ny fitondrana Kiobana izao ny bolongan'i Yoani  nakatson’ny fitondrana Kiobana izao ny bolongan’i Yoani ary (heverin’ny) mpamaham-bolongana Kiobana sy izay mety ho mpamaham-bolongana amin’ny ankapobeny ho fanivaivana izany.
Nahazo fankasitrahana hafa i Yoani Sánchez tamin’ny Zoma teo, raha nahazo ny lokan'i Ortega y Gasset  momba ny fanaovan-gazety avy amin’ny gazety epaniola El País, loka malaza indrindra ho amin’ny teny espaniola (mitovy amin’ny loka Pulitzer ho amin’ny teny anglisy) nomena ny anaran’ilay mpanao gazety sady filozofa José Ortega y Gasset . Araka ny tatitra  nataon’i Penúltimos Días [es], dia nahazo ny loka tao amin’ny sokajy Fanaovan-gazety niomerika izy noho ireto antony manaraka ireto :
… amin’ny fahaizany midify ny famerana ny fahafaha-miteny misy any Kiobà, ny fahaizany maneho vaovao amim-paharanitan-tsaina ary ny fahazotoany fatratra hiditra amin’ny tontolon’ny olo-tsotra mamoaka vaovao.
Namoaka lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe ““Tsy mampino ahy!”  Tsy mampino ahy!” i Yoani rehefa nahare ny loka:
Ny ampahany maha-mpitia hainteny ahy – izay mahalala ireo olon’ny soratra, filozofa ary mpikambana ao amin’ny akademia – dia nihora-pifaliana raha nandre ny loka momba ny fanaovan-gazety Ortega y Gasset nomena ahy. Ny lafiny mahampamaham-bolongana kosa, izay mahatsapa ny sakana maro sedraina raha hiditra amin’ny aterineto, (sy) ny fampirisihana maro azoko dia nomen-danja ho amin’izany tokoa.
Ny hany tsaroako dia ny fanamarihan’i Eliot tamin’ny volana Avrily ny hasiakan’ny lohataona raha nanapa-kevitra ny handroaka ny devoliko tamin’ny bolongana aho. Nanomboka tamin’ny fanalana ilay tena nangeja indrindra aho, dia ilay nahatonga antsika hisaron-tava, hanova endrika ary hangina. Ny faharoa indray dia ny mahatonga ny fahatsapana ho nilaozana, dia ilay tsy fihetsehana satria fantatra fa tsy hahefa loatra tsinona. Tamin’ny tapaky ny volana Aogositra, dia mihahita taratra fa efa lavitra ny tangorom-bitsika (vitsika tsy ao amin’ny lahatsoratra nadika fa mifanandrify indrindra amin’ny filaza azy amin’ny teny malagasy kosa) nangonin’ny fahadisoam-panantenana, ny fahakiviana ary ny fisalasalana isaky ny mamoaka lahatsoratra aho. Izay noheverina ho toerana nitsaboako tena, nanifikifika ireo faharatsiana rehetra ireo, no indro lasa toerana ho an’ny maro izay, noho ny kisendrasendra mahafinaritra, mba manana ny devoliny manokana ihany koa.
Ry mpamaky, izaho ihany no hitanareo amin’ity toerana ity. Ianareo, miady hevitra, mirehidrehitra, manasivana ary manao fahirano, nony farany no manorina ny bolongana.
Maro tamin'ny mpamaham-bolongana sy ny mpamaky no nankalaza ny fahazoan’i Yoani Sánchez ny loka, tahaka an’i Enrisco [es] , Bitácora cubana [es] , El blog de Tania Quintero [es] , raha tsy hitanisa afa-tsy anarana vitsy. Nanoratra ny faniriany  ny mpanoratra Kiobana Zoe Valdés, izay mipetraka any Paris :
Manantena aho fa hotohizan’ny loka Ortega y Gasset ny fankasitrahana ny mpanao gazety Kiobana, indrindra fa ireo izay mitoka-monina any am-pigadrana, nefa na dia eo aza izany dia niezaka mampahalala ny zavamisy any amin’ny fonja Kiobana hatrany izy ireo. Na ireo mpanao gazety kiobana hafa izay miezaka ny hampahafantatra ny zavamisy ao amin’ny nosy amin’ny alalan’ny finday na mailaka tsy voaaro, izay ratsy kokoa noho i Yoani ny mahazo azy ireo – araka ny nolazainy ihany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/04/09/794/
 The International Herald Tribune: http://www.iht.com/articles/2007/10/10/business/cubablog.php
 The New York Times: http://www.nytimes.com/2008/03/06/world/americas/06cuba.html?_r=4&pagewanted=1&hp&oref=slogin&oref=slogin
 BBC Mundo: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7311000/7311959.stm
 nialan'i Fidel Castro sasatra: https://www.globalvoicesonline.org/2008/02/20/caribbean-castro-end-of-an-era/
 nakatson'ny fitondrana Kiobana izao ny bolongan'i Yoani: https://www.globalvoicesonline.org/2008/03/26/cuba-blocking-bloggers/
 lokan'i Ortega y Gasset: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Ortega/premian/valentia/periodismo/investigacion/elpepisoc/20080405elpepisoc_8/Tes
 José Ortega y Gasset: http://en.wikipedia.org/wiki/JosÃ©_Ortega_y_Gasset
 “Tsy mampino ahy!”: http://desdecuba.com/generaciony/?p=225
 Enrisco [es] : http://enrisco.blogspot.com/2008/04/esta-es-buena.html
 Bitácora cubana [es]: http://cubabit.blogspot.com/2008/04/premio-para-yoani-snchezde-generacin-y.html
 El blog de Tania Quintero [es]: http://taniaquintero.blogspot.com/2008/04/yoani-desde-la-habana.html
 Nanoratra ny faniriany: http://zoevaldes.skyrock.com/article_1666353174.html